Ahoana no Hampifaliana An’Andriamanitra?
AHOANA no azontsika ampifaliana an’Andriamanitra? Misy zavatra azontsika omena azy ve?... Hoy i Jehovah: ‘Ahy ny biby rehetra any an’ala.’ Hoy koa izy: “Ahy ny volafotsy, ary Ahy ny volamena.” (Salamo 24:1; 50:10; Hagay 2:8) Misy zavatra azontsika omena an’Andriamanitra anefa. Inona izany?...
Avelan’i Jehovah isika hifidy ny hanompo azy na tsia. Tsy manery antsika hanao izay tiany izy. Andeha hofantarintsika ny hoe nahoana isika no nataon’Andriamanitra ho afaka hisafidy.
Angamba fantatrao ny atao hoe robot. Ny robot dia milina manao zavatra araka izay nanamboaran’ny mpanamboatra azy. Tsy manan-tsafidy izy io. Azon’i Jehovah natao ny nanamboatra antsika rehetra ho tahaka ny robot. Amin’izay dia tsy afaka manao afa-tsy izay tiany hataontsika isika. Tsy nanao an’izany anefa izy. Nahoana, hoy ianao?... Robot ny kilalao sasany. Rehefa misy bokotra tsindriana, dia manao zavatra araka izay nanamboaran’ny mpanamboatra azy ilay kilalao. Efa nahita kilalao tahaka izany ve ianao?... Mankaleo ny olona ny kilalao tahaka izany matetika, satria mitovy foana ny zavatra hainy. Tsy tian’Andriamanitra raha mankatò azy toy ny robot isika. Tiany kosa raha manompo azy isika satria tiantsika izy ary maniry hankatò azy isika.
Nahoana isika no tsy nataon’Andriamanitra tahaka ity “robot” ity?
Manao ahoana ilay Raintsika any an-danitra, rehefa mankatò azy isika satria maniry hanao izany?... Mety hampifaly na hampalahelo an’i Dada sy Neny tokoa ve ny toetranao?... Lazain’ny Baiboly fa “ny zanaka hendry mahafaly ny rainy; fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny.” (Ohabolana 10:1) Hitanao faly ve i Dada sy Neny rehefa manao izay asainy ataonao ianao?... Manao ahoana kosa izy ireo rehefa tsy mankatò ianao?...
Inona no azonao atao mba hampifaliana an’i Jehovah, ary Dada sy Neny?
Andeha hojerentsika indray ny amin’i Jehovah Raintsika any an-danitra. Lazainy amintsika izay azontsika atao hampifaliana azy. Raiso ange ny Baibolinao, ary sokafy eo amin’ny Ohabolana 27:11 e! Miresaka amintsika Andriamanitra eo. Hoy izy: “Anaka, hendre, ary ampifalio ny foko, mba hamaliako izay miteny ratsy ahy.” Inona no dikan’ny hoe miteny ratsy olona, araka ny hevitrao?... Miteny ratsy anao ny olona iray, raha mihomehy anao sady milaza hoe tsy mahay akory ianao fa be hambo fotsiny. Nahoana no lazaina fa miteny ratsy an’i Jehovah i Satana?... Andeha hojerentsika.
Tadidio, araka ny hitantsika tao amin’ny Toko 8, fa te ho ambony indrindra i Satana, ary tiany hankatò azy ny olona rehetra. Lazainy fa matoa manompo an’i Jehovah ny olona, dia satria hanome azy ireo fiainana mandrakizay i Jehovah. Sahy nanohitra an’i Jehovah mihitsy i Satana, rehefa vitany ny nitarika an’i Adama sy Eva tsy hankatò. Hoy izy tamin’Andriamanitra: ‘Mahazo zavatra aminao ny olona matoa manompo anao. Fa avelao kely ange hanaovako azy, raha tsy handa anao daholo izy e!’
Ahoana no nanoheran’i Satana an’i Jehovah rehefa nanota i Adama sy Eva?
Marina fa tsy tena ireo teny ireo no hitantsika ao amin’ny Baiboly. Raha mamaky ny tantaran’i Joba anefa isika, dia hahita fa zavatra tahaka izany no nolazain’i Satana tamin’Andriamanitra. Tena nisy vokany lehibe teo amin’i Satana sy Jehovah ny fitondran-tenan’io lehilahy io, na nivadika tamin’Andriamanitra izy na tsia. Andeha hosokafantsika eo amin’ny Joba toko voalohany sy faharoa ny Baibolintsika, mba hahitana izay nitranga.
Mariho fa tany an-danitra koa i Satana, rehefa tonga teo amin’i Jehovah ireo anjely, araka ny Joba toko voalohany. Hoy i Jehovah tamin’i Satana: ‘Avy taiza ianao?’ Namaly i Satana fa nijerijery tetỳ an-tany izy. Hoy i Jehovah: ‘Voamarikao ve fa manompo ahy i Joba, ary tsy manao ratsy?’—Joba 1:6-8.
Tonga dia nanohitra toy izao i Satana: ‘Tsy misy manahirana an’i Joba ange matoa izy manompo anao e! Raha tsy arovanao intsony izy ary tsy tahinao intsony, dia hiteny ratsy anao mihitsy izy.’ Hoy i Jehovah: ‘Eny àry, ry Satana, ataovy izay tianao hatao aminy, fa ny tenany no aza kasihina.’—Joba 1:9-12.
Inona no nataon’i Satana?... Nasainy nangalarin’ny olona ny omby sy ampondran’i Joba, ary nasainy novonoina ny mpiandry azy ireo. Nipoaka ny varatra ka namono ny ondry sy ny mpiandry azy. Avy eo dia nisy olona tonga nangalatra ny rameva ary namono ny mpiandry azy ireo. Nahatonga rivotra mahery i Satana, tamin’ny farany, ka nianjera ny trano nisy an’ireo zanak’i Joba folo. Maty daholo ny zanany rehetra. Mbola nanompo an’i Jehovah foana i Joba, na dia teo aza izany rehetra izany.—Joba 1:13-22.
Rehefa nifankahita tamin’i Satana indray i Jehovah, dia nomarihin’i Jehovah taminy fa tsy nivadika mihitsy i Joba. Mbola nilaza indray i Satana hoe: ‘Raha avelanao hasiako ny vatany, dia hiteny ratsy anao eo imasonao izy.’ Nanaiky i Jehovah nefa tsy navelany hovonoin’i Satana i Joba.
Inona no niaretan’i Joba, ary nahoana izany no nahafaly an’Andriamanitra?
Nasian’i Satana aretina àry i Joba, ka feno vay ny vatany. Maimbo be ilay fery ka tsy nisy te hanakaiky azy. Ny vadiny aza niteny hoe: ‘Ozòny Andriamanitra dia aoka ho faty ianao!’ Tonga nitsidika an’i Joba ireo lehilahy nilaza ho namany. Vao mainka nampitombo ny fahoriany anefa izy ireo, rehefa nilaza fa nanao zavatra tena ratsy i Joba matoa voa mafy tahaka izany. Sahirana sy nijaly be i Joba noho ny nataon’i Satana. Tsy nivadika anefa izy, fa nanompo an’i Jehovah foana kosa.—Joba 2:1-13; 7:5; 19:13-20.
Nanao ahoana i Jehovah rehefa hitany fa tsy nivadika i Joba?... Faly izy satria afaka niteny tamin’i Satana hoe: ‘Jereo i Joba! Manompo ahy izy satria maniry hanao an’izany.’ Afaka nilaza i Jehovah fa nanome porofon’ny maha mpandainga an’i Satana i Joba. Hanahaka an’i Joba ve ianao?... Tena tombontsoa ny mampiharihary fa diso ny tenin’i Satana hoe vitany ny mampiala ny olona rehetra tsy hanompo an’i Jehovah. Tena sarobidy tamin’i Jesosy io tombontsoa io.
Tsy namela an’i Satana hitarika azy hanao ratsy mihitsy ilay Mpampianatra Lehibe. Tena nahafaly ny Rainy ny ohatra tsara nomeny! Afaka nanondro an’i Jesosy i Jehovah sady namaly an’i Satana hoe: ‘Jereo ny Zanako! Tsy nivadika tamiko mihitsy izy satria tia ahy!’ Eritrereto koa ny fifalian’i Jesosy, afaka nampifaly ny fon’ny Rainy. Io fifaliana io no nahafahany niaritra ny fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana.—Hebreo 12:2.
Te hanahaka an’ilay Mpampianatra Lehibe ve ianao, ka hampifaly an’i Jehovah?... Tohizo àry ny fianaranao momba izay tian’i Jehovah hataonao. Hahafaly azy ianao raha manao izany!
Vakio ato amin’ireto andininy ireto izay nataon’i Jesosy mba hampifaliana an’Andriamanitra, sy izay tokony hataontsika koa: Ohabolana 23:22-25; Jaona 5:30; 6:38; 8:28; 2 Jaona 4.
Hizara Hizara Ahoana no Hampifaliana An’Andriamanitra?